नेपालले शास्त्रीय समाजवादको भारी बोक्न सक्दैन :: शंकरप्रसाद अधिकारी :: Setopati
सन् १८९० को दशकमा लन्डन र न्यूयोर्कको वातावरणीय समस्या घोडाको लादी व्यवस्थापन हुन्थ्यो। सन् १८९४ लाई त 'दि ग्रेट हर्स म्यानर क्राइसिस' भनी घोषणा गरियो। सन् १८९८ मा न्यूयोर्कमा भएको सहरी योजनासम्बन्धी प्रथम अन्तरार्ष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा घोडाको लादी व्यवस्थापन नै थियो। तर उक्त सम्मेलनले पनि समाधानको उपाय पहिल्याउन सकेन। करिब एक दशकमै इन्धनचालित मोटरगाडीको व्यापकताले उक्त समस्या स्वत: समाधान भयो।
प्रविधि विकास र उपयोगको ग्राफ करिब अंग्रेजी अक्षर 'एस' को आकारमा बन्छ। अर्थात् पहिले विस्तारै विकास भई एकैपटक स्वाट्टै बढेपछि संतृप्तीको अवस्था (स्याचुरेसन) मा पुग्छ। करिब एक सय वर्षअघि घोडाको लादी सहरी वातावरणीय समस्या थियो। आज जैविक इन्धनचालित गाडी प्रदूषणको कारक छ। विद्युतीय गाडीले यो समस्या छिट्टै समाधान गर्नेछ। यसरी छोटै अवधिमा प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनलाई प्राविधिक हलचल (टेक्नोलोजिकल डिसरप्सन) भनिन्छ।
स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका भविष्यवेत्ता (फ्युचरिस्ट) टोनी सेवाले सन् २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जामा उल्लेखनीय विकास हुने सन्दर्भ 'ऊर्जा र यातायातको स्वच्छ हलचल' (क्लिन डिसरप्सन अफ इनर्जी एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन) नामक किताबमार्फत् आकलन गरेका छन्।
सिटी विश्वविद्यालय न्यूयोर्कका प्रख्यात सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्री, 'द फिजिक्स अफ इम्पोसिबल' का लेखक मिचियो काकुले सन् २०३० सम्ममा विशेषत: जैविक प्रविधि, सूक्ष्म प्रविधि (नानो टेक्नोलोजी) र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) विकासले फड्को मार्ने बताएका छन्। विभिन्न विधाका विश्वका तीन सय अग्रणी वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तासँग गरेको अन्तर्वार्ताका आधारमा उनले यो आकलन गरेका हुन्।
अहिले विज्ञान तथा प्रविधि विकास चौथो लहरमा छ। पहिलो लहरमा 'थर्मल डाइनामिक्स' विकास भई औद्योगिक क्रान्ति भयो। दोस्रोमा विद्युत, म्याग्नेटिक्स, डाइनामो, रेडियो, टेलिभिजन र विद्युतीय यन्त्रको आविष्कार भयो।
पाँचौं लहरमा 'फ्युजन पावर' विकास हुनेछ। यसमा सामुद्रिक पानीबाट असीमित मात्रामा ऊर्जा (हाइड्रोजन) र हिलियम उत्पादन, क्वान्टम कम्प्युटर र ब्रेन नेटको विकास हुनेछ। क्वान्टम कम्प्युटरले स्टोरेज ब्याट्रीको क्षमता बढाउने छ। ब्रेन नेटले हालको विद्यमान डिजिटल इन्टरनेटलाई विस्थापित गर्नेछ।
प्रविधिलाई व्यवसायीकरण गर्ने ठूला कम्पनीका मालिकको आम्दानी तीव्र रूपमा बढ्नेछ। अन्तर्देशीय तथा देशीय आर्थिक असमानता थप चुलिनेछ। बेरोजगारी र आर्थिक विषमता सम्बोधन गर्न अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक जोसेफ स्टिगलिज् र प्राध्यापक थोमस पिकेटीले सुझाएअनुसार विश्वव्यापी कर प्रणाली र 'युनिभर्सल बेसिक इन्कम' को प्रत्याभूति जरूरी हुनेछ।
दोस्रो, उदारवाद विरोधी विचारले निजी पुँजी र पुँजिपति नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदा लगानी प्रतिकूल वातावरण बनेको छ। 'दलाल पुँजीवाद' को विरोधको नाममा विदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्धप्रति नकारात्मकता निर्माण गरिँदैछ। एमसिसी अनुदान उपर भएको कुप्रचार यसको सटिक उदाहरण हो।
'अहिले सिंगो विश्व भूमण्डलीकरण, बजारवाद, सञ्चार क्रान्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको वस्तुस्थितिले आक्रान्त छ। नेपाली कांग्रेसले यसबारे यथोचित ध्यान दिएको छैन। निकट भविष्यमा भूमण्डलीकरण र बजारवाद कमजोर हुँदै जानेछ। तर त्यो निकट भविष्य अझै २५-३० वर्षअघि आइहाल्ने होइन। २५-३० वर्षको यो समयलाई निर्बाध गतिले हामीले भूमण्डलीकरण र बजारवादलाई जान दिने हो भने नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन।
यस विषयमा हामीले अत्यन्त गम्भीर भएर अध्ययन गरेर आजै सोच्नुपरेको छ। आज हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनबीच अन्धाधुन्ध रूपले आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यसका लागि दुवैले प्रविधिका क्षेत्रमा पनि ठूल्ठूला फड्को मारेका छन्। यस क्षेत्रमा कांग्रेसले नित्य नयाँ किसिमले सोच्दै जाने क्षमताको प्रदर्शन गर्नु आजको समयको माग हो।'
ठीक हो, 'बजारवाद' लाई त निश्चित वैचारिक धारले स्वीकार नगर्ला। प्रविधि विकासको प्रवृत्ति हेर्दा भूमण्डलीकरण र बजारवाद २५-३० वर्षपछि कमजोर हुने आकलन कति वस्तुवादी विश्लेषण होला!
आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक आयामको सन्दर्भमा 'एकल श्रम विभाजन र बहुमुखी सांस्कृतिक प्रणाली' (सिंगल डिभिजन अफ लेबर, मल्टिपल कल्चरल सिस्टम) को विशेषता रहने भनाइ केही विद्वानको थियो। तर बहुसांस्कृतिक प्रणालीको मान्यतालाई पूर्णत: नष्ट नगरेको भए पनि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा पनि सम्मिलन (कन्भर्जेन्स) को अवस्था देखिँदै छ। पश्चिमा संस्कृतिको पूर्वीय संस्कृतिउपरको अतिक्रमण स्वस्थ सांस्कृतिक विकास होइन। भूमण्डलीकरणको प्राविधिक आयाम भने उत्साहजनक छ। प्रविधि विकास र प्रसारलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिनु विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
प्रदीप गिरि समाजवाद, गान्धीवाद र सुमेकरको 'स्मल इज ब्युटिफुल' लाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। उहाँ दिगो विकास र आर्थिक समताको पक्षपाति हुनु राम्रो हो। तर गान्धीवाद र 'सानो नै राम्रो' को अवधारणा निरपेक्ष रूपमा उपयुक्त हो भन्नु वस्तुवादी नहोला। सधैं 'सानो मात्र राम्रो' भन्दा हामी विकासको प्रवाहबाट किनारा लाग्छौं। प्रकृति, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो विकास विश्व पुँजीवादका एजेन्डा भइसकेका छन्।
हाम्रो देशमा वायु प्रदूषण उच्च हुनुमा भारतको योगदान भएको सन्दर्भ लुम्बिनी क्षेत्रको वायु प्रदूषण झन्डै काठमाडौंकै हाराहारीमा हुनुले पुष्टि हुन्छ। विश्व तापमानमा वृद्धि र चीन र भारतबाट उत्सर्जित कालो कार्बनका कणहरूका कारण हाम्रा हिमाल पग्लिँदै छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले मात्र 'स्मल इज ब्युटिफुल' भन्नुको के अर्थ होला र !
नेपालले अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने नीति लिने हो। 'डुइङ बिजनेस' मा सुधार गर्ने हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ। व्यवसायिक र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल हुने नीति र व्यवहार त्याग्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। लक्षित वर्गको अवधारणामा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति लिनुपर्छ। युनिभर्सल किसिमको वर्तमान सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालको वित्तीय क्षमताले धान्दैन, दिगो हुँदैन। यो गरिब वर्गमैत्री नभएको तथ्यगत विश्लेषण आइसकेका छन्।
'पोष्ट क्यापिटालिजम' का लेखक पल म्यासन भन्छन्- 'पुँजीवादले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो आनुवांशिक चरित्रमा परिवर्तन गरी आयु बढाउने क्षमता राख्छ। पुँजीवादको विकल्प शास्त्रीय समाजवाद हुन सक्दैन।'
'दलाल पुँजीवाद' अन्त्य गर्ने नाममा नेपालले शास्त्रीय समाजवादको भारी बोक्न सक्दैन। नेपाल झुटको खेती गर्न कति उर्वर भूमि रहेछ भन्ने सन्दर्भ एमसिसीविरूद्ध जबरजस्त सिर्जना गरिएको जनमतले पुष्टि गरेकै छ। झन् उदार आर्थिक नीतिविरूद्ध कुप्रचार गर्न त के नै गाह्रो छ र! नेपाल समकालीन विश्व आर्थिक व्यवस्था र प्रविधि विकाससँग तादात्म्यता राख्दै अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ७, २०७८, ०४:०५:००